20 Atụmatụ na iji ụgbọala E-Azụmaahịa tọghatara a Ezumike Oge | Martech Zone
Elekere na-akụ, mana oge agabeghị ka ndị na-enye e-commerce na-edozi saịtị ha iji mee ka ọtụtụ ntụgharị gbanwee. Nke a infographic si akakabarede njikarịcha ọkachamara na ihe oma na-enye ndụmọdụ siri ike njikarịcha 17 nke ị kwesịrị ị mejuputa ozugbo ma ọ bụrụ na ị nwere olile anya ịzụ ahịa azụmaahịa ezumike oge a.
E nwere ụzọ atumatu atọ ị ga - esi na - ebugharị oge niile nke egosiri na ọ na - ebugharị mgbanwe ọzọ maka ndị na - azụ ezumike.
A na-adọta 71% nke ndị na-azụ ezumike mbupu n'efu
A na-adọta 48% nke ndị na-azụ ezumike mfe nloghachi
A na-adọta 44% nke ndị na-azụ ezumike ọnụahịa dabara
17 Mgbakwunye Mgbanwe Ecommerce Mgbakwunye Atụmatụ
Na-akwalite onyinye gị na ụbọchị izu ezumike kachasị elu - gụnyere ụbọchị ekele, Black Friday, Cyber ​​Mọnde, Mọnde Green, na Shibọchị Mbupu Na-adịghị.
Upsell na obe-ire iji mee ka onu ogugu onu ahia - tụlee onyinye dị ka mbupu n'efu na nzụta gị, ngwaahịa dị iche iche, nye obere onyinye na ihe ndị ọzọ.
Achọghị ndebanye aha na ndenye ọpụpụ - ndị na-azụ ahịa nwere ndị ga-ejupụta ụyọkọ ozi ọzọ nwere ike ịhapụ ụgbọ ala ha.
Na-ebuli maka mkpanaka - ọtụtụ ndị na-azụ ahịa na-eme nnyocha na ekwentị ha. Y’oburu na ijikereghi, you'll ghaghi agha agha.
Gbalia ihu na peeji dicha oso - saịtị ecommerce na-ahụkarị ndekọ ndekọ n'oge ezumike. Ekwela ka ebe nrụọrụ weebụ dị nwayọ ma ọ bụ gbajiri merụọ azụmahịa gị.
Mee ka ikuku email bawanye - ndị ọbịa gị dị njikere ịzụrụ n’oge ezumike. Echefula ohere gị.
Chọ mma! - nye saịtị gị ihe eji eme ememme kwesịrị ekwesị iji bulie ahụmịhe ịzụ ahịa mmetụta uche. Ọbụna nke ka mma, jiri ọchị mee ka ha cheta gị.
Jiri onyinye wulite listi email gi - gbanwee ndị ọbịa ọzọ. Nyochaa ọnụahịa nnweta ndị ahịa gị ma tụlee gụnyere onyinye efu iji mee ndị ọbịa ọhụụ.
Mepụta echiche nke ịdị ngwa - ụbọchị mbupu ikpeazụ na ire ahịa ọkụ nwere ike ịmepụta echiche nke ịdị ngwa nke ga-enyere ọtụtụ ndị ọbịa aka ịgbanwe ngwa ngwa.
Mee ego mbelata - inyocha ụzọ dị iche iche nke pitching gị ego. Ikwesiri ime 50% kwụsịrị, $ 25 gbanyụọ, ma ọ bụ zụta otu nweta otu n'efu?
Nye nkwado ndị ahịa dị mma - ezigbo ndị ahịa na-akwado site na nkata ndụ, mgbasa ozi mmekọrịta, ma ọ bụ ekwentị nwere ike inye aka merie ihe mgbochi ịzụta na weebụsaịtị gị.
Mee kaadị onyinye nfe ịzụta - mgbe onye ọbịa enweghị echiche onyinye zuru oke, kaadị onyinye bụ ezigbo nhọrọ. Mee ka ọ dị mfe.
Jiri usoro iguzosi ike n'ihe mee ka ha laghachi - iweghachite ndị ahịa nke anọ gị nwere ike inye aka mee ka ịre ahịa n'oge nwayọ nwayọ nwayọ.
Nye onyinye pụrụ iche maka mgbanwe maka nyocha - nyocha nwere ike inyere aka ịchụgharị mgbanwe n'afọ niile. Jiri ohere gị dị elu karịa iji bulite nyocha na ngwaahịa gị.
Nye onyinye mbughachi efu - usoro nloghachi na-emesapụ aka ga-eme ka ndị ahịa nwee obi ike ma weghachite ndị ahịa ọbụlagodi ezumike.
Nyere ha aka ime nke onwe - mee ka ọ dịịrị ndị ahịa gị mfe itinye ihe edeturu na ịzụta ihe onyinye ọ bụla.
Nye onyinye wrapping n'efu - mgbe ị na-enye onyinye na-enweghị onyinye onyinye, ị na-egbochi isi ọwụwa ndị ahịa. Ka ị na-enwekwu isi ọwụwa, ị nwere ike iso gị na-emekọrịta ihe.
Nke a bụ ozi ecommerce zuru ezu site na mma
Tags: Lelee-eche-ireahịa nkwadoegoe-commerce infographice-azụmahịa Atụmatụnjikarịcha ntụgharị ecommerceecommerce Atụmatụemailemail ugborofree laghachimbupu n'efukaadị onyinyeNhazi nke onweonyinye onyinyeemail ezumikeụbọchị ezumike ụbọchị ezumikemmemme iguzosi ike n'ihem-azụmahịamcommercengwa ahianjikarịcha ekwentịụbọchị ezumike kachasị elukeonwendebanyembupu laghachigbasieịdị ngwa na-
Dee 2, 2016 na 1: 17 AM
Isiokwu na-enye aka maka ịkekọrịta anyị.